စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page4of 30 | Frontier Myanmar
ကိုဗစ်-၁၉ထောက်ပံ့ငွေ ပထမအသုတ်ကို ဇူလိုင်အတွင်း အပြီးသတ်ပေးအပ်နေ
ဒုတိယအကြိမ်အစိုးရထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်၏ ပထမအသုတ်အဖြစ် အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် ငွေကျပ်၂၀,၀၀၀နှုန်း ပေးအပ်နေ
News, News Feed, စီးပွားရေးသတင်းတို, စီးပွားရေး, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
ကိုဗစ်ဒဏ်ကိုကျားကန်ရန် လူမှုစီးပွားဘဝအစီအမံများ ပိုမိုလိုအပ်နေ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဒဏ်ကိုခုသာခံသာရှိအောင် အတိုးနှုန်းလျှော့ချမှုများနှင့် အခြားစီးပွားရေးလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ကြိုဆိုလိုက်သည်။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိတ်ရခြင်းနှင့် ကြီးမားသည့်အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများကို ရှောင်လွဲနိုင်ရန် ထပ်မံဆောင်ရွက်ရမည့် လိုအပ်ချက်များရှိနေသည်ကိုမူ အများက သဘောတူကြသည်။
Wave Money က ၂၀၁၈ အတွင်း ကျပ် ၂ ထရီလီယံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကျပ်ငွေ ၂ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလျံ) လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု Wave Money က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကြေညာသည်။ Wave Money သည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် အေးဂျင့် (ကိုယ်စားလှယ်).
ပစ်ကပ်ကား အမျိုးအစားသစ် New Ranger ကို ဖို့ဒ် မိတ်ဆက်
ပစ်ကပ် ကားအမျိုးအစားသစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ New Ranger ကို ဖို့ဒ်မြန်မာ (Ford Myanmar) နဲ့ Capital Automotive Co.,Ltd တို့က မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ “တကယ့်ကို တောင့်တင်းခိုင်မာပြီး ရုပ်ထွက်ကြမ်းကြမ်း၊ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီတဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေနဲ့ New Ranger ကို တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာ.
ပြည်တွင်းထုတ် ကားအမျိုးအစားသစ်ကို ဆူဇူကီး မိတ်ဆက်
မြန်မာပြည်တွင်းက စက်ရုံမှာ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ Swift အမျိုးအစား လူစီးကားသစ်ကို ဆူဇူကီးက အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ “ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆူဇူကီးရဲ့ All New Swift မော်တော်ကား အမျိုးအစားကို ထုတ်ဖော်ပြရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ Swift ကားတွေကို ကျွန်တော်တို့.
ပါရမီသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဖြန့်ဖြူးရန် အမျိုးသမီးများအား ဖိတ်ခေါ်
ပါရမီအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ဖြန့်ချိမယ့် LPG ဆလင်ဒါဓာတ်ငွေ့အား ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့အတွက် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပါရမီဓာတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီက ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ ပါရမီရဲ့ ရည်သန်မှုများစွာထဲက တစ်ခုကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Parami LPG အမျိုးသမီး သီးသန့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အစည်း ဖွ့ဲစည်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ .
အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက်ကို တယ်လီနောက တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် မိတ်ဆက်
တယ်လီနော၏ 4G ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံထားသည့် မြို့နှင့် မြို့နယ်များအားလုံး၌ အသုံးပြုနိုင်မည့် အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီဟု တယ်လီနောက ကြေညာလိုက်သည်။ ကနဦး စတင်သုံးစွဲမှု အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေနှင့် တစက္ကန့်လျှင်5Mb မြန်နှုန်းရှိ အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရက် ၉ဝ.